Home Wararka Gudaha Axmed Madoobe, raggii ma isagaa ka haray?
Axmed Madoobe, raggii ma isagaa ka haray?
Agaasimihii hore ee nabad suggida Qaranka Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ayaa wareysi uu siiyay warbaahin gaar loo leeyahay ku eedeeyay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam in uu dhibaato ku yahay siyaasadda Soomaaliya.
Waxa uu sheegay in uu lasoo dagaalamay afar madaxweyne, markalena ay isku dhici doonaan madaxweynaha cusub, waa sida uu hadalka u dhigaye.
Axmed Maxamed Islaam ayaa ka mid ahaa madaxdii dowlad goboleedyada ee samaystay isbahaysigii Golaha Isbahaysiga Dowlad Goboleedyada , wuxuuna noqday kan keliya ee ka haray madaxdaasi oo dhammaantood siyaabo kala duwan xilka ku waayay, iyada oo loo tiirinayay in dagaal siyaasadeed oo ay dowladda federaalka ee Farmaajo ay sababta ugu weyn ahayd.
Intaas keliya ma ahane, Axmed Madoobe ayaa sidoo kale xilka jooga xilli uu kursiga ka dagay madaxweynihii federaalka ee sida ay isu hayeen.
Haddaba qormadan oo aan faafinay 2019-kii ayaad kaga bogan kartaa duruufihii xiligaas ku xeernaa Axmed Madoobe.
1-dii Luuliyo, 2019-kii
Sidoo kale dadka ku kala aragti duwan arrimaha Jubbaland ayaa sidoo kale aad u adeegsanaya baraha bulshada, iyaga soo dhigaya qoraalo , sawirro iyo muuqaalo ay ku cabirayaan fikirkooda
Previous articleXildhibaanada Baarlamaanka Labada Aqal oo shir deg deg ah berri yeelanaya
Next articleBarcelona Oo Ka Hadlay Mustaqbalka Gavi, Maxaa Cusub?
Guddoomiyaha Degmada Buulo Burte ee Gobolka Hiiraan oo ka qaylo dhaamiyay...